UPDATE: Ogow Sababtii maanta labaatanka Askari loogu xiray Boosaaso & Wararkii ugu dambeeyay. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Ogow Sababtii maanta labaatanka Askari loogu xiray Boosaaso & Wararkii ugu...
Boosaaso (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya, in labaatan askari talaadadii maanta lagu xiray magaaladaasi.
Wararka ayaa sheegaya, in askartan oo isugu jira Boolis iyo Daraawiish lagu xiray mid ka mid ah xarumaha laamaha amniga ku leeyhiin Xarunta Gobolka Bari.
Wararka qaar ayaa waxay sheegayan in ciidamadan ay yihiin kuwii saakay weeraray hoyga uu Magaalada Boosaaso ka degan yahay Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood, iyadoo warar kalena ay sheegayan in ay ka hareen ciidamadii toddobaadkii hore gudaha u soo galay magaalada.
Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood ayaa waxaa uu Warbaahinta ka weeraray Maamulka uu Madaxweynaha ka yahay Sicidii Cabdullaahi Deni, taasoo loo maleynayo inay keentay weerarka lagu qaaday hoygiisa.
Ciidamada Boosaaso ayaa waxay saakay hoyga Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood taggeen, xilli uu ka maqnaa, iyadoo ay baaritaan ka sameeyeen hoygiisa, waxaana lagu eedeeyay inay qalqal-geliyeen qoyskii odayga.
Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Bari ayaa sheegay haddii la doonayay in la soo xiro Nabadoon Baydhabood loo baahnaa in warqad laga soo qaato maxkamadda, balse aan loo baahnayn in sifo aan sharci ahayn loo soo xiro.
Mana jirto ilaa iyo hadda cid ka hadashay xariga maanta magaalada Boosaaso loogu geystay labaatanka askari.
Waxaa magaalada Boosaaso toddobaadkii hore laga dareemay xaalad kacsanaan ah, inkastoo magaalada dib looga saaray ciidamadii uu fadhigoodu ahaa Degmada Carmo.
labaatan askari oo maanta lagu xiray Boosaaso
Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood